संसारकै खतरनाक सडक नेपालमा !! जहाँ जान कुइरे हरु पनि थर थरि कापछ्न भिडियो सहित !! – Complete Nepali News Portal
संसारकै खतरनाक सडक नेपालमा !! जहाँ जान कुइरे हरु पनि थर थरि कापछ्न भिडियो सहित !!
November 14, 2017	1,389 Views
मुक्तिनाथमा विष्णु भगवानको पूजा हुन्छ । सो तीर्थस्थल बौद्धमार्गीहरुको पनि आश्थाको केन्द्र हो । हिन्दु धर्मका विशेष गरी वैष्णव परिवारका भक्तजन एवम् भारतीय तीर्थालुहरू बढी मात्रामा यहाँ आउने गर्दछन् । मुक्ति क्षेत्रका रुपमा रहेको सोही मन्दिरमा रहेको १०८ धाराबाट नै कालीगण्डकीको उत्पत्ति भएको छ । कालीगन्डकी विष्णु भगवानको एक अवतारका रुपमा रहेको शालिग्राम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी पनि हो । यसका अतिरिक्त मुस्ताङ क्षेत्रमा साँस्कृतिक अतिक्रमण एवम् यहाँको अद्धितीय विशेषतामा आँच आउनसक्ने चिन्ता पनि यहाँका स्थानीय नागरिकमा छाएको छ । मुस्ताङको विविध पक्षको अनुसन्धानमा लागिपरेका स्थानीय मुखिया गुरुङ मुस्ताङमा बढ्दै गएको आधुनिककारणले यहाँको साँस्कृतिक सम्पदा नै अतिक्रमित हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कला, संस्कृतिको प्रर्वद्धन गरी पर्यटक पैदल मार्गहरूको निर्माणको सट्टा हिजोआज मुस्ताङमा गाडी गुड्ने धुलाम्मे बाटो बनाउने होड छ । त्यहाँको जनजीवनको इतिहास र कलालाई सहरी संस्कृतिक र निर्माणले प्रतिदिन उछिनिरहेको छ । अर्कै संसारको अलौकिक आनन्द प्राप्त गर्न यहाँ आइपुग्ने भक्तजन र पर्यटकहरूमा सडकले दिएको सुविधाका अतिरिक्त यी चिन्ता पनि थपिदिएको महसुश हुन्छ । यस्ता पक्षमा सम्बन्धित निकाय र स्थानीयहरुले समयमै ध्यानदिन सके मुस्ताङको सुन्दरतामा आँच आउने छैन । – ग्लोबलनेपालको सह कार्यमा :